ब्लगर ह्याट एसईओ को लागी ब्लगर Martech Zone
आइतवार, जनवरी २,, २०१। बिहीबार, अक्टुबर 29, 2015 Douglas Karr
राम्रो मित्र र सल्लाहकार, रोन ब्रुम्बारगरले आज बिहान मलाई ब्लगरमा ब्लगमा एउटा गडबड लि link्कको साथ एक नोट छोड्नुभयो जुन उसले अनुसरण गरिरहेका केही कुञ्जीशब्दहरूको लागि गुगल अलर्टमा पप अप गर्दै थियो। म यहाँ कुञ्जी शब्दहरू दोहोर्याउँदिन, किनकि म मेरा आगन्तुकहरूलाई पछाडि लिंक गर्न वा ब्लग भ्रमण गर्न चाहान्दिन, तर परिणामहरू विचलित भएका थिए। यहाँ ब्लगबाट पाठको एक खण्ड छ जुन मैले लिंक गरेको पाएँः
युआरएल र ब्लगको नाम कुनै न कुनै रूपमा स .्केतन गरिएको देखिन्छ ताकि सिर्जनाकर्ताले परिणामहरू ट्र्याक गर्न सक्दछन्। पोष्टहरूमा समावेश गरिएको तेस्रो पार्टी सामग्री बोल्ड कुञ्जीशब्दहरूसँग छरिन्छ - यो कुञ्जीशब्द घनत्व परीक्षण गर्न देखा पर्दछ। साथै, त्यहाँ अन्य ब्लगमा ब्याकलिंक्सहरू छन् जसले अन्य कुञ्जी शव्दहरू परीक्षण गरिरहेका छन् ... ट्रेल अगाडि बढ्दै जान्छ।
प्रश्नमा रहेको ब्लगले कुनै सामग्री चोरेको जस्तो देखिंदैन, केवल केही कुञ्जी खोज शब्दहरू र वाक्यांशहरूको केही परीक्षणमा ड्याबिलिंग गर्दै। यो डरलाग्दो कारण यो हो कि तिनीहरूले सम्भवतः परीक्षण गरिरहेका छन् ताकि तिनीहरूले खोज ईन्जिनमा ती सर्तहरू कसरी जित्ने भनेर हिसाब गर्न सक्छन्। मैले रोनलाई थाहा दिएँ र उसलाई एउटा लिंक पठाएँ ब्लगरको स्पाम ब्लग रिपोर्टिंग फार्म; आशा छ, यो तुरुन्तै बन्द हुनेछ साथै सबै सम्बन्धित ब्लगहरू जो तिनीहरूसँग लिंक हुँदै छन्।
म आश्चर्यचकित छैन कि त्यहाँ स्प्यामरहरू त्यहाँ छन् जुन यी विधिहरूसँग परीक्षण गर्दैछ। म हैरान छु, यद्यपि यो सही गुगलको नाक मुनि भइरहेको छ! म्याट कट्सले गुगलले केहि समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्दछ 2009 मा वेबस्पम - हुन सक्छ तिनीहरूको आफ्नै प्लेटफर्म एक शीर्ष प्राथमिकतामा हुनुपर्छ!
मलाई यो रनको बारेमा जान्न र लेख्न दिनु भएकोमा धन्यवाद! रोन बिटवाइ सलुशन्सका अध्यक्ष हुन्, यहाँ इण्डियानापोलिसको एक प्रमुख फर्म हो जसले राष्ट्रिय स्तरका साथ केही आश्चर्यजनक कार्य गर्दछ। माइक्रोसफ्ट शेयरपोइन्ट विकास र एकीकरण.
टैग: कालो टोपीकालो टोपी एसईओकालो टोपीकालाहाट एसईओब्लगरGoogle +मैट कर्ट्सMicrosoft SharePointरोन ब्रम्बारगर
Cappuccino र प्याकेजिंग को झूटा
जनवरी 13, 2009 मा 2: 32 एएम
यदि तपाईंले गुगल डाटाबेसलाई भाषणको शक्ति दिनुभयो र भन्नुभयो "मलाई शिकागोको उडानको बारेमा बताउनुहोस्" त्यो सायद यसले के भन्छ भन्ने कुराको धेरै नजिक छ। कसैले यसको काँधमा हेरे बिना डाटाबेस अनिवार्य रूपमा अनजान छ।
यसले कुञ्जी शव्दको वजन सही रूपमा प्राप्त गर्नेछ। यसले क्रिया/संज्ञा/स्टप शब्दहरूको संख्या सही रूपमा प्राप्त गर्नेछ। यसले अन्य धेरै जटिल कारकहरू सही रूपमा प्राप्त गर्नेछ तर यो शब्दशः दोहोर्याइएको नभएसम्म यसको अर्थ हुँदैन।
म पनि यो देखेर छक्क परेको छैन, यस्तो देखिन्छ कि 2010 ब्रूट फोर्स रणनीतिहरूले लिने वर्ष हुन सक्छ जहाँ स्प्यामरहरूले चरम भोल्युममा खोज परिणामहरूमा सामूहिक आक्रमण गर्छन् जबकि Google पृष्ठ एक परिणामहरू हस्तान्तरण गर्नु अघि शब्दहरूको सही संयोजनको आवश्यकतामा कठोर हुन्छ। ।
म तपाईंको खोजहरू थप सुन्न चाहन्छु डग यदि यससँग थप केहि विकास हुन्छ।
जर्ज dw किसानहरू
अगस्ट 5, 2009 मा 4: 45 AM
अन्तिम दुई कमेन्ट स्प्याम जस्तो लाग्दैन ???
ब्लाह मलाई तपाईको ब्लग मनपर्छ, म फर्केर आउनेछु र यसलाई जाँच गर्नेछु आदि….,
अब तिनीहरूसँग PR3 ब्याकलिङ्क छ hmmmm...
ठिक छ, म आफैंले लिङ्क पोस्ट गर्दिन 🙂
अगस्ट 5, 2009 बेलुका 12:46 बजे
म Pagerank मा धेरै तौल राख्दिन - म धेरै ट्राफिक तान्ने कुञ्जी शव्दहरूको लागि राम्रो रैंकिंगमा धेरै ध्यान दिन्छु। यो ब्लग सयौं कुञ्जी शव्दहरूमा राम्रो स्थानमा छ। के म PR9 भएको चाहान्छु? निश्चित! यद्यपि म त्यो निर्णय गर्न सक्दिन। मसँग टन ब्याकलिङ्कहरू र उत्कृष्ट इतिहास छ - किन मेरो PR कम छ भन्ने निश्चित छैन।
धन्यवाद RE: स्प्याम। म अहिले IntenseDebate मा छु र यी पुराना टिप्पणीहरूलाई स्प्यामको रूपमा चिन्ह लगाउन कसरी पत्ता लगाउने प्रयास गर्दैछु!
अगस्ट 5, 2009 बेलुका 12:47 बजे
धन्यवाद RE: स्प्याम। म अहिले IntenseDebate मा छु - उनीहरूले यसलाई कसरी अतीत बनायो भन्ने निश्चित छैन। तिनीहरू अब गएका छन्!